Mahatsiaro ireo Pop Sovietika: Feo sy Zavamaneno (VIA) tao URSS · Global Voices teny Malagasy
Mahatsiaro ireo Pop Sovietika: Feo sy Zavamaneno (VIA) tao URSS
Voadika ny 18 Marsa 2017 11:20 GMT
Mpikambana ao amin'ny Hello Song! Fitambarana fitaovana am-peo. Sary: YouTube
“Vesyolye Rebiata” (Ry Zazalahy Marisidrisika), “Krasnye Maki” (Kolekiko, voninkazokely menamena ), sy “Siniaia Ptitsa” (Voromanga – Blue Bird)—ireo no anisan'ny tarika vitsivitsy manjaka amin'ny mozika Sovietika nalaza nanomboka ny taona 1960 ka hatramin'ny taona 1980. Raha ni-twist, nandihy disco, ary ni-swing (boogie) ny Tandrefana, dia nionona tamin'ny endrika hira tandrefana efa voasivan'ny fanjakana, amin'ilay lazaina hoe feo sy zavamaneno (VIAs) kosa ny Sovietika.
Taorian'ny ady lehibe faharoa, nirongatra tany amin'ny faritra Sovietika tamin'ny alalan'ny onjampeo Eoropeana sy fandraketana antsokosoko ny hira pop Tandrefana. Na dia teo aza ny ezaka fandraràna nandaniam-bola be, tsy nahavita nanakana ireo mozika tsy nahazo alalana, hiram-borizano izay nahazo mpijery marobe tao anatin'ny URSS ny governemanta. Tratran'ny fahamailoana noho ny lazan'ny mozika ny mpitarika Sovietika, tsy noho ny fampiroboroboany ny soatoavina tandrefana “mampivarilavo” ihany fa noho ny lazany toa manohintohina ny voalaza fa fahambonian'ny kolontsaina Sovietika.
Ny VIA no nanome lalan-kafa hanomezana alalana hira hafa ho an'ny fanjakana miezaka kokoa mankany amin'ny propagandy hanokoloana sy hahazoana ny fon'ny taranaka vaovaon'ny tanora Sovietika. Noho ny tsy fisian'ny safidy hafa naparitaka be, tena nalaza tsy misy tahaka izany ny VIA, nivarotra raki-kira an-tapitrisany ary lasa feon-kira ho an'ny sosialisma faramparany.
Mahagaga, manana zavatra iombonana marokokoa amin'ireo namany Tandrefana noho ny taranaka teo alohany amin'ny hira Sovietika ny endrika am-peo sy sary an'ireo tarika malaza indrindra tao amin'ny Firaisana Sovietika tahaka ny “Poyuschie gitary” (“Gitara Mihira”), “Samotsvety” (“vatosoa”), sy ny “Pesniary”. Araka ny nosokajian'i Artemy Troitsky tao amin'ny bokiny Back in the USSR (Miverina ao URSS) :
Tsy dia nankasitrahana ny voambolana «rock» sy «beat», ka nomena anarana tamin'ny fomba ofisialy hoe VIA ireo vondrona ireo … endrika “beat” voafehy (na raha lazaina mivantana dia hoe nanesorana ny vaikany) ny VIA. Nanana mpitendry sy mpihira teo amin'ny 10 teo araka ny mahazatra ny tarika VIA iray… ary ahitana zava-maneno marobe amin'ny endrika Shadows, covers amin'ny teny Rosiana somary amin'ny mozika maivana kokoa eo amin'ireo feonkira amin'ny hira malaza amin'ny teny Anglisy sy Amerikana ary ny feon'ny pop Rosiana mahazatra.
Ao ambadiky ny sehatra, nanana “tale artistika” (vakio hoe: mpanao sivana) ny VIA tsirairay izay nisahana ny feo sy ny fisehoan'ny vondrona mba hifanaraka amin'ny metimety amin'ny fanjakana. Voaràra tsy mahazo mandihy sy mihetsiketsika betsaka eny an-tsehatra ny VIA, nanana fitsipika henjana momba ny fitafiana izay costume (ambony ambany mitovy) no nanaovana, fitafiam-pirenena sy fanamiana miaramila, ary tsy maintsy nanaraka ny foto-kevitra Sovietika – na dia malemy aza, na mety hoe tamin'ny vanim-potoanan'i Brezhnev sy Gorbatchev.
Noho ny YouTube sy ny tahiry antserasera vitsivitsy, mbola azo atao ny mihaino ny VIA, izay toa tsy dia hita ho adala sy bemiray kokoa ankehitriny, manokatra varavarankely amin'ny endrika mozika azon'ny mpanivana ao amin'ny fanjakana kolokoloina: ny tranonkala tahaka ny sssrviapesni.info, via-era.narod.ru, ary zaycev-nett.ru dia mampiseho lisitra marobe ny VIA miaraka amin’ ny sasantsasany amin'ny hiran'izy ireo malaza.
Tsy nahatàna ny lazan'izy ireo teo amin'ireo mpihaino taorian'ny vanim-potoana Sovietika ny VIA. na izany aza. Tao amin'ny VKontakte ohatra, an-jatony vitsivitsy hatramin'ny an'arivony eo ho eo ireo mpikambana ao amin'ny vondrona nankafy ny VIA Sovietika, vasoka raha oharina amin'ireo vondrona mankafy ny (hira) Tandrefana ankehitriny sy ny VIA hafa.
Na izany aza, manohy mampiseho ny fitiavan'izy ireo ny vondrona tamin'ny fahatanoran'izy ireo ny zokiolona nahazo taona. Nilaza i Valery Kolpakov (teraka tamin'ny 1957), mpanorina ny via-era.narod.ru, fa mpankafy ny VIA izy tamin'ny fahatanorany ary nanjary nifankafantatra tamin'ireo mpiangaly mozika sasany, tahaka an'i Aleksey Puzyrev ny Jolly Fellows sy Albert Asadullin ao amin'ny Gitara Mpihira tamin'izy niasa tao amin'ny diskôteky tao Moskoa. Tamin'ny taona 2005, tapa-kevitra hanangana tranonkala tamin'ireo sisa tavela tamin'ny forum an'ny mpankafy ny VIA hafa izy ka hatramin'izao manohy manavao ny pejy ary manoratra lahatsoratra ho amin'izany.
Raha maro tamin'ny VIA no nirodana niaraka tamin'ny Firaisana Sovietika, naharitra kosa ny lazan'izy ireo, indrindra teo amin'ireo taranaka Sovietika nihalehibe niaraka tamin'ireo mpanakanto: feno fahatsiarovana momba ny afisin'ny taonan'ny fahatanorana sy ny fitiavana voalohany ny takelaka fanehoan-kevitra ao amin'ny YouTube momba ny hiran'ny VIA. Tahaka ireo namany Tandrefana, indraindray mbola manao fampisehoana ho an'ny mpihaino marobe mpanembona ny taloha ireo tarika ireo.
25 taona taorian'ny firodanan'ny Firaisana Sovietika, mbola vato fehizoro ara-kolontsainan’ i Rosia sy ny mpikambana hafa ao amin'ny Fiarahamonin'ny Fanjakana Mahaleotena ny VIA. Araka ny voalazan'i Kristen Roth-Ey tao anatin'ny sanganasany Moscow Prime Time,, “fanarian-dia ny rock Sovietika, saingy tsy midika izany fa tsy miseho araka ny tokony ho izy teo imason'ny olona nanao azy sy nampiasa azy”. Mbola resahana sy kolokoloin'ireo tena nankafy azy ireo tamin-kafanampo ny mozika sy ny tantaran'ireo mpanakanton'ny VIA.